Android Wear အက်ပလီကေးရှင်း၏ရရှိနိုင်သည့် version 1.1 | Androidsis
Android Wear အက်ပလီကေးရှင်းအတွက်ဗားရှင်း ၁.၁ [APK ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူပါ] အင်္ဂါရပ်အသစ်များနှင့်ပါ
လွန်ခဲ့သောနှစ်ရက်ကတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဖြစ်သည် como Google က Android Wear အသစ်သို့ဖြန့်ချိရန်ပြင်ဆင်နေသည် ၎င်းသည်စမတ်နာရီသို့မဟုတ်စမတ်နာရီကဲ့သို့သောဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများထဲမှတစ်ယောက်ကိုပိုင်ဆိုင်သောအသုံးပြုသူများအတွက်သတင်းကွဲပြားသည်။ မနေ့ကဂူးဂဲလ်ကဒီကနေကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားနိုင်တဲ့သူ့ရဲ့ဘလော့ဂ်တခုမှာတခုခုကိုထည့်သွင်းထားတယ် Wear အသစ် update ကို.
ကျွန်ုပ်တို့ Firmware အသစ်ကိုရယူရန်စောင့်နေစဉ် ယနေ့ Android Wear အက်ပလီကေးရှင်းလက်ခံရရှိသောဗားရှင်းသစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရယူနိုင်သည် Wear သို့လာမည့်အင်္ဂါရပ်အသစ်များအတွက်ပြင်ဆင်ရန်။ App ၏အသွင်အပြင်နှင့်အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များ၌အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောသတင်းများရှိသည်။
အများစုမှာ အဓိကမျက်နှာပြင်ကို Google ကဒ်စံနှုန်းဖြင့်လုံးဝဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ နာရီမျက်နှာပြင်နှင့်အသံလုပ်ဆောင်ချက်များရွေးချယ်ခြင်း၊ အက်ပလီကေးရှင်းများပိုမိုရယူရန် Play Store သို့ ၀ င်ရောက်ခြင်း၊ Wear အတွက်အသစ်သောသူများအတွက်အကြံဥာဏ်ကဒ်နှင့်သတိပေးချက်အချို့ကိုမီးမောင်းထိုးသည်။ Play Store သို့တိုက်ရိုက် ၀ င်ရောက်ခြင်းမှအပအခြား Android Wear အက်ပလီကေးရှင်း၌ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သည့်အရာကိုအာရုံစိုက်ရန်ကြွင်းသောအရာများကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။
အသစ်ပြောင်းသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့သည် WiFi သည်အဓိကအသစ်အဆန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ကိုနားလည်လိမ့်မည်။ ဂူဂဲလ် Fit ကိုအာရုံခံနိုင်သည့်အချက်အလက်ကိုသုံးရန်ခွင့်ပြုသည့် WiFi ဆက်သွယ်မှု.
နောက်ထပ်အကြီးအအသစ်အဆန်းဖြစ်ပါတယ် ကွဲပြားခြားနားသော Wear ကိရိယာများကိုတွဲဖက်မှုအတွက်အထောက်အပံ့ သူတို့ကိုထပ်ပြီးတွဲစရာမလိုဘဲသင်အကြားပြောင်းနိုင်ပါတယ်။
ဒီဗားရှင်းတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖြစ်ကြသည် အားလုံးဆက်စပ်အကောင့်များရရှိနိုင်လိမ့်မည်ဟုပြက္ခဒိန်ဖြစ်ရပ်များ၎င်းကိရိယာသည်စက်ကိရိယာတစ်ခုစီနှင့်အထွေထွေဆက်တင်များအတွက်ဒီဇိုင်းပြင်ဆင်ထားသောမျက်နှာပြင်နှင့်ဤသည် Android Wear ဗားရှင်းကိုအဆင့်မြှင့်သောအခါ install လုပ်သော Google Play Services 7.3.27 ကိုတပ်ဆင်လိမ့်မည်။
APK ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည် ဒီ link ကနေ
OS ဖြင့် Google အသုံးပြုပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » APK » Android Wear အက်ပလီကေးရှင်းအတွက်ဗားရှင်း ၁.၁ [APK ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူပါ] အင်္ဂါရပ်အသစ်များနှင့်ပါ
Adobe Lightroom သည် RAW အထောက်အပံ့၊ တက်ဘလက်အထောက်အပံ့နှင့်အခြားဗားရှင်း ၁.၁ သို့အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့သည်
LG G Stylo ကို ၅.၇ လက်မမျက်နှာပြင်၊ Snapdragon 5,7 နှင့် Lollipop တို့ကိုကြေငြာခဲ့သည်